निकै गहकिलो र मर्माहत यथार्थता पस्कनु भयो एकलब्य जी! दण्डहिनताको श्रिन्खलाले सगर चुम्दै छ, देश दिन दुईगुणा र रात चौगुणाका दरले निरन्तर हत्या, हिंसा, बलत्कार, भष्टचारको दलदलभित्र फस्दै छ, शान्ती,सुरक्षाको अनुभुती गरेर जीवन बाँच्न पाउने क्षण नेपाली भुमिमा समाप्त हुँदै छ, भाईचाराको सम्बन्ध टुटिसकेको अवस्था छ, पैसाको लागि रगत चुस्ने दानवहरु सुरक्षित स्थान ठान्दै छन, यहाँ मानवता भन्ने कुरा मरुभुमिमा पानीको मुल खोजे सरी हुँदै छ,यहाँ आफ्नो र पराइ छुट्टाउने आँखाहरु बन्द भएका छन,न्याय खोज्दै हिंड्ने मनहरु न्याय नपाएर मुर्छित छन, देश र जनताको ठेक्का लिएका ठेकदारहरु जनताको नाम लिएर सत्ता हडप्ने खेलमा एक अर्कालाई गाली गर्दैमा व्यस्थ छन र समाजमा दिनानु दिन बढ्दै गएको यस्ता निच कार्यलाई बिषम परिस्थितीको परिणाम भनेर हाँस्यासपद कुतर्क गर्दै छन। समाजलाई उचित बाटोमा डोराउने जिम्मा बोकेका गुरु भनाउदाहरु आफ्नै शिष्यको क्रुर हत्यामा सामेल बन्दै छ। साँचो अर्थमा नेपाल र नेपाली समाज उल्टो दिशमा बहदै छ र आगामी दिनहरुमा झन झन ठुलो दुर्घटनाहरु निम्ताउदै छ।
मान्छे ले मान्छे लाई कुटी कुटी मार्न सक्ने कती सम्म को रा छेसी मानसिकता को भिड बढ्दै छ हाम्रो समाज मा !
केहि समय यता देखीको यो भिडको मानसिकतामा चल्ने यस्ता उग्रतम कार्यले चिन्ता लाग्न थालेको छ ।
जनताहरुमा राजनितीको अराजकता बिस्तारै 'विकेन्द्रीकरण' भैरहेको छ र यो शुभ संकेत कदापि होईन । तर फितलो सुरक्षा र प्रशासनको कमजोरीले गर्दा पनि जनता आफैले आफ्नो बचाउ गर्नु पर्ने स्थितिमा पुगेकाले पनि यस्तो घटना घटदैछ भन्दा पनि गलत नहोला ।
कहीलेकाही म पनि सोच्छु भुपि शेरचन गलत छन:
यहाँ सपूतहरु धेरै मरीसके, खै त सपूत मरेर देश बनेको । सपूत मरेपछि कपूतको राज चल्दो रहेछ । मत भन्छु :
बन्दैन मुलुक देशका कपूत मरेर नगए
This happens when bunch of hooligans rule the country and mobs provide the decision.
Never expect better.
हैन कपुत पनि कति धेरै रहेछन त ठरकिजी !
असहिष्णुता अनि सोच्न र निर्णय गर्न सक्ने खुबी नभएको भिडले कागले कान लग्यो भन्दा कान नछामी कागको पछाडि दौडे जस्तै भइरहेको छ । देशमा मान्छेको संख्या घट्दैछ, ढुंगेयुगका जनावरहरुको संख्या बढ्दैछ।
आंखा तरेको बहानामा शुरु भएको झगडाले के नतीजा निम्त्यायो छर्लङै छ । तराइबाट शुरु भएको आंखा झिक्ने र अपहरण गर्नेको हौवा तनहु हुंदै काठमाडौ र भक्तपुर पुगिसक्यो । तनहुंमा भारतीय पर्यटकहरु पिटिएर थुनिनुसमेत परेकाले आफ्नो भ्रमण र फ्लाइट टिकट समेत रद्द गरेर सुनौली हुंदै फर्केको भनेर समाचार पढ्दा नेपाल भ्रमण वर्ष २०११ को याद आएको थियो । नेपालीहरु अब नचिनेको मान्छे अर्थात अतिथिहरुलाई अतिथि देवो भव: हैन "अतिथि गोदो" को मार्गतिर हिंडेको देखाउंछ । अब त्यो ट्याक्सी चालक जसले बाटोमा रोएको बालकलाई उद्दार गर्न खोज्यो तर आंफै गोदाइ खाएर उद्दार गरिनु पर्ने हालतमा पुग्यो भने के अब आपतमा परेकाले उद्दार पाउने जमाना रहिरहला?
रितिक रोशन काण्ड पछिको यो खतरनाक र व्यापक हौवाले समग्र नेपालीलाई आफ्नो स्तर र हैसियत अनि नेपालको सामाजिक स्थिति कता जांदैछ भन्ने सोच्न चाहीं बाध्य तुल्याउंछ । नेपालमा यस्तो हुन्छ भनेर सभ्य र आधुनिक युगका मान्छेलाई भन्न चाहीं लाज लाग्छ भने यस्तो कर्तुत कहिले सम्म रहिरहने ?
अराजकता र भीडले शासन गर्ने मध्ययुगिन परिपाटीको अर्को नतीजा हैन यो ?
नेपालीहरु अब नचिनेको मान्छे अर्थात अतिथिहरुलाई अतिथि देवो भव: हैन "अतिथि गोदो" को मार्गतिर हिंडेको देखाउंछ । Itsanice one, I like it.
तपाइको लेख राम्रो संग पढेर लामै कमेन्ट लेख्ने बिचार थियो, दौतरीमै चक्का चाम भएर चौपट भयो।
नेपालको स्थीती आज भन्दा भोली खतम भोली भन्दा पर्सी खतम भएको छ। यांहा उदण्दता र नियम मिच्नेहरु जब पूरस्क्रित हुन्छन तब सबै आफ्नो कानुन हातमा लिएर फैसेला गर्न उत्साहित हुन्छन। भएको त्यी हो।
नाम मात्रका पूलिस छन, छारो फोर्सो केही गर्दैनन। देशको ठेक्का लिएका नेताहरु गोठाले बुद्दी जस्तै छन। गाइले कसरी धेरै दुध देला भने जस्तै कसरी धेरै सत्तामा टिकीएला, बस तेही छ ध्यान।
ठरकी जीको बन्दैन मुलुक देशका कपूत मरेर नगए भने निकै घत पर्यो है।